March 2021 - Padaethar
March 31, 2021 by Padaethar
မိတ်ဆွေများအတွက် အလျင်မြန် အကျိုးထူးကို ရရှိစေမည့် နှင်းဆီ ( ၁၀ )ခက်
ထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးပြီး ကံပွင့် လာဘ်ပွင့်ကာ ဝင်ငွေတိုးချင်တဲ့ ခုနှစ်ရက်သားသမီး မိတ်ဆွေများအတွက် အလျင်မြန်အကျိုးထူးကို ရရှိစေမည့် နှင်းဆီ ဆယ်ခက် စီးပွားတက် အဓိဋ္ဌာန် စခမ်းဝင်နည်း။ နှင်းဆီပန်း (၁၀) ပွင့် (ဘာအရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်)ကို ဆူးမပါအောင် သေချာသန့်စင်ပြီးအိမ်ရှိ ဘုရားကျောင်းဆောင်ရှေ့မှာ စာပွဲအမြင့်ပေါ်တင်ပြီး ကပ်လှူပါ။ ပြီးလျှင် သံဃာ့မဟာနယက ဥက္ကဋ္ဌ ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးချီးမြှင့်သည့်ဘုရားဂုဏ်တော်ဆယ်ပါးဂါထာကို ဂုဏ်တော်တစ်ပါးလျင် ပုတီး (၁)ပတ်စိပ်ရပါမည်။ ဂုဏ်တော်တစ်ပါးစီ၏ အရှေ့မှ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ကိုထည့်၍ ရွတ်ဆိုရပါမည်။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟ။ံ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္မေန္ဒာ သုဂေတာ လောကဝိဒူ အနုတ္တေရာ ပုရိသဒမ္မသာရထိ သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံ ဗုဒ္ဓေါ ဘဂဝါ ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီး သန့်ပြန်တဲ့ အဝတ်အထည်ကိုလဲလှယ်ပါ အချိန်မှန်အောင်လည်းဂရုစိုက်ပါ။ စနေနေ့ မှ … Read more
အိမ်ရှင် ကျောင်းဆရာမရဲ့ ယောက်ျား နှင့် ရုပ်ချောလှတဲ့ အိမ်ဖော်မ ဇာတ်လမ်း…
အိမ်ရှင် ကျောင်းဆရာမရဲ့ ယောက်ျား နှင့် ရုပ်ချောလှတဲ့ အိမ်ဖော်မ ဇာတ်လမ်း… မိန်းမ ဖြစ်သူက ကျောင်းဆရာမ ဖြစ်တော့ တာဝန်ကျရာ နယ်မြေဒေသမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်။ အိမ်မှာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တယ်။ သားသမီးက မရှိ စားဖို့ သောက်ဖို့ ချက်ပြုတ်ဖို့က ပြသနာ မကြီးလှပေမယ့် အဝတ်လျှော်နဲ့ အိမ်သန့်ရှင်းရေး က ပြသနာရှိလာတော့….. ယောက်ျားဖြစ်သူက အိမ်ဖော်တစ်ယောက်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုပြီး အိမ်ဖော်ခေါ်ထားလိုက်တယ်။ တာဝန်ကျရာ မြို့မှ ကျောင်းပိတ်ရက် အိမ်ကို ပြန်ရောက် လာသော အခါ သူ့ယောက်ျားကို မိန်းမဖြစ်သူ ဆရာမက ….. ” ရှင့် အိမ်ဖော်ကလည်း ချောလှချည်လား ကိုမိုးကြီးရဲ့ ” ယောက်ျားဖြစ်သူ ကိုမိုးကြီးက ပြန်ပြောတယ် …. ” ချောလား မချောလား မသိပါဘူးကွာ … Read more
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူက ကိုယ့်ကို လိမ်နေတယ်လို့ သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်…
တစ်ခါတရံမှာ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူက ကိုယ့်ကို လိမ်နေတယ်၊ အဲဒါကိုလည်း ကိုယ်က သိနေတယ် …၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ရောက်နေတယ်ဆိုရင် စိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုကို ခံစားနေရမှာ အသေအချာပါပဲ …။ ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစား လုပ်ရက်လေခြင်း၊ ကိုယ့်ကို လိမ်ရက်လေခြင်းဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ပွားများအောင် တွေးတောမနေဘဲ ဒါလေးတွေကို သတိရဖို့ ပြောချင်ပါတယ်နော် …။ (၁) လိမ်တဲ့သူက ကိုယ်ခံစားရတာထက် ပိုပြီး ခံစားရမယ်ဆိုတာ သတိရပါ… မကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်တဲ့ သူဟာ တချိန်ချိန်မှာ ဝဋ်ပြန်လည်ပါလိမ့်မယ် …။ ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကို အလွဲသုံးစား လုပ်ခဲ့သလိုမျိုး သူလည်း တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပြန်ကြုံရမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ် …။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကို လိမ်တဲ့သူကို ကိုယ်တိုင် အပင်ပန်းခံ တုံ့ပြန်နေဖို့ … Read more
နိုင်ငံတကာက လူတွေဘယ်အရွယ်မှာ အိမ်ထောင်ပြုကျလည်း အထူးသဖြင့်တော့ အာရှတိုက်ကလူတွေ ဘယ်လိုအခြေအနေရောက်ပြီဆို အိမ်ထောင်ကျသွားလည်း…ဘယ်အချက်တွေရှိနေရင် အိမ်ထောင်ပြုချိန်ရောက်တာလည်း …ဘယ်လိုလူနဲ့လက်ထပ်ရင် ပိုပြီး ပျော်ရွှင်အောင်မြင်တဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခု ရနိုင်လည်း ဆိုပြီး နိုင်ငံတကာက ပညာရှင်တွေ ဆွေးနွေးထားတာတွေ သုတေသနတွေ ရှာဖတ်ကြည့်ပြီးမှ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကျေနပ်သွားတော့တယ်….. ခင်ဗျားလေးတို့လည်း ကျုပ်လိုခံစားဖူးရင် ဆက်သာဖတ်ကြည့်ပေတော့…( ကျုပ်တို့က မအိုသေးပါဘူး..သူတို့ကသာ စောစောစီးစီးတွေ ဖြစ်နေကြတာ) ၁။ အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလည်း ဒါကအရေးကြီးဆုံးအချက်ပါ….အနည်းဆုံးတော့ နှစ်ဆယ်ကျော်ရပါမယ်.ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အကောင်းဆုံး အချိန်ကတော့ ၂၈ နှစ်နှင့် ၃၅ နှစ်ကြားပါ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ၂၂ နှစ်မှာကျောင်းပြီးတယ် အိမ်ထောင်မပြုခင် အနည်းဆုံး ၃ နှစ် ၄ နှစ်တော့ အလုပ်လုပ်ဖူးသင့်ပါတယ် အလုပ်အတွေ့အကြုံ ဘဝအတွေ့အကြုံရှာကြည့်သင့်ပါတယ်..ကိုယ့်ဟာကိုယ်အလုပ်တွေလုပ် ခရီးတွေသွား ကိုယ်သုံးချင်သလိုသုံးလိုက်ပါ…. ဘယ်သူ့ကိုမှ အားကိုးစရာမလိုဘဲ … Read more
အသက်(၂၅)နှစ်မတိုင်ခင် အိမ်ထောင်ပြုဖို့ လုံးဝ မစဉ်းစားသင့်ကြောင်း ပြနေတဲ့ အချက်(၅)ချက်
အသက်(၂၅)နှစ်မတိုင်ခင် အိမ်ထောင်ပြုဖို့ လုံးဝ မစဉ်းစားသင့်ကြောင်း ပြနေတဲ့ အချက်(၅)ချက် အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့သူတိုင်း ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ ဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်းထဲက အရာ တစ်ခု ဆိုပေမယ့် ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်နေတဲ့ အရာမို့ လွယ်လွယ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသင့်တဲ့ အရာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေ့လို တိုးတက်မှုတွေ၊ မယုံကြည်စရာ များတာတွေနဲ့ ခက်ခဲ ရုန်းကန်ရတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ပိုလို့တောင် လွယ်လွယ် မတွေးသင့်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အသက် (၂၅) နှစ် မတိုင်ခင် အိမ်ထောင် မပြုဖြစ်ရင် ကိုယ့်အတွက် ပိုပြီး ကောင်းတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ၂၅ နှစ် မတိုင်ခင်မှာ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ လုံးဝ မစဉ်းစားသင့်ဘူးဆိုတာကို ဒီအချက်တွေ ကြည့်ရင် သိသာပါတယ်။ ( ၁ ) လူငယ်ဘဝကို … Read more
ကောင်မလေးတစ်ယောက် စိတ်ပါနေပြီဆိုတာ သိနိုင်တဲ့အချက် အမျိုးသမီးတွေကိုနားလည်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ တကယ်ရောအဲ့လောက်ခက်လို့လား ။ အခု ကျွန်တော်တို့ ဖော်ပြမယ် အချက် ၁၀ ချက်ကတော့ အမျိုးသမီးတွေ စိတ်ပါနေတာကို သိနိုင်မယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ် ။ ( ၁ ) သင့်အနားရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်နေခြင်း များသောအားဖြင့်တော့ သင့်အပေါ်ကြိတ်ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးတွေက အခုလိုဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ နဲနဲတော့ ကပြောင်းကပြန်ဆန်တယ် ..ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခုလိုသူခံစားလာရရင် ရှက်ရွံ့လာပြီးတော့ သင်နဲ့ဝေးရာကိုထွက်သွားတတ်တယ် ။ ( ၂ ) ရုတ်တရက်လာထိနေခြင်း တစ်ယောက်ယောက်စိတ်ပါနေတဲ့အချိန်မှာ အခုလိုဖြစ်တာက ယေဘုယျအဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါပဲ ။ သူစိတ်ပါနေပြီဆိုရင်သင့်ကိုထိဖို့အကြောင်းပြချက်ရှာလိမ့်မယ် ။ အခုလိုတွေ့နေရပြီဆိုရင်တော့ သင်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံလိုက်နဲ့တော့ ။ ( ၃ ) ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်ပြောခြင်း သူမရဲ့အပြောအဆိုအမူအယာကို သင်သတိထားမိလာလိမ့်မယ် ။ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပို ညစ်ပေပေပြောတတ်လာပြီးတော့ … Read more
ယောင်္ကျားလေးတွေ ကိုယ့်ကိုတမ်းတမ်းစွဲနေစေဖို့ မိန်းကလေးတွေလိုက်နာသင့်တဲ့အရာများ
ယောင်္ကျားလေးတွေ ကိုယ့်ကိုတမ်းတမ်းစွဲနေစေဖို့ မိန်းကလေးတွေလိုက်နာသင့်တဲ့အရာများ ဘယ်အရာကိုမဆို အလွယ်ရရင် တန်ဖိုးမထားတတ်ကြတာ သဘာဝပဲလေ ဟုတ်တယ်ဟုတ်?ဆိုတော့ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ယောင်္ကျားလေးတွေ ကိုယ့်ကိုရူးသွပ်မတတ်စွဲလမ်းနေစေဖို့ မိန်းကလေးတွေ လိုက်နာရမယ့် အချေနည်းတွေကို စုစည်းဖော်ပြအကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ ။ 1.သူ့၇ဲ့ဖုန်းခေါ်သံကြားတိုင်း အပြေးအလွှားသွားကောက်ကိုင်နေစရာမလိုပါဘူး။သင့်မှာလည်း မအားလပ်တဲ့အချိန်ဆိုတာ ရှိအုံးမှာပဲလေ…။ 2.msgတွေကို ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင် တရစပ်ဖြေနေတာမျိုးထက် လိုရင်းတိုရှင်းပဲဖြေပါ။ 3.ကိုယ့်ကိုလာရှိတ်နေတဲ့စာကို ချက်ချင်းရပလိုင်းပြန်တာထက် နာရီဝက်၊တစ်နာရီလောက်ခြားပြီးမှ ပြန်ပါ။မဟုတ်ရင် ကိုယ်ပဲ သူစကားလာစပြောမှာကို စောင့်နေတဲ့အတိုင်း အထင်ခံရနိုင်တယ်လေ…။ 4.”နောက် ၅မိနစ်အတွင်း သင်ဘာလုပ်မလဲ?’’ဆိုတဲ့ အဆက်အစပ်မရှိ သင့်အချိန်တွေ၊စိတ်ကူးတွေကို စွက်ဖက်လိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးကို ဖြေနေစရာမလိုပါဘူး။လျစ်လျူရှုလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ 5.သင်ခုချိန်မှာ ဘာလုပ်နေမလဲ?ဘယ်မှာရှိနေနိုင်မလဲ?ဘသူနဲ့ရှိနေလောက်သလဲ?? အစရှိတဲ့ မေးခွန်းအကြောင်းအရာတွေကို သင့်ကိုသဘောကျချစ်နှစ်သက်သူတွေကို တွေးစေပြီး ပူပန်နေစေပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်မှတ်တမ်းတစ်ခုလုံးကို လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်လို ဒလဟောကြီးဖွင့်ပြနေတာတော့ မဟုတ်သေးဘူးလေနော်…။ 6.သူ့ပရိုဖိုင်းအောက်မှာပဲ တ၀ဲလည်လည်ဖြစ်နေတာမျိုး၊မလိုအပ်ပဲ သူ့TIMELINEမှာစာသွားရေးတာမျိုး၊အမြဲလိုလိုသွားမန့်တာမျိုးတွေ … Read more
လူသိနည်းပြီး သတိမမူကြတဲ့ တံမြက်စည်းနိမိတ်များ
လူသိနည်းပြီး သတိမမူကြတဲ့ တံမြက်စည်းနိမိတ်များ ၁။ အပျိုတွေ တံမြက်စည်း ကျော်မိရင် အိမ်ထောင်မကျခင် ဗိုက်ကြီးတတ်ပါတယ်။ ၂။ အပျို၊ လူပျိုတွေ ခြေဖျား‌ပေါ်ကျော်ပြီး တံမြက်စည်း ခတ်မိရင် အဲ့ကလေးတွေ အိမ်ထောင်မကျတော့ပါဘူး။ တံမြက်စည်းကို တံတွေးနဲ့ ပြန်ထွေးခိုင်းပါ။ ၃။ အိမ်နီး ခြံနီးချင်းတွေ ကိုယ့် အိမ်/ခြံဝကစပြီး တံမြက်စည်း လာလှည်းသွားရင် ဝင်မယ့်လာဘ် မဝင်တော့ပါဘူး။ သူ့အိမ်‌ဝက ပြန်လိုက်လှည်းယူပါ။ ၄။ တံမြက်စည်းသစ်နဲ့ အိမ်ထဲက အိမ်ပြင် စ မလှည်းရပါဘူး။ ပစ္စည်းတစ်ခုခု အိမ်ဝချပြီး အိမ်ထဲ အရင်လှည်းထည့်ရပါတယ်။ ၅။ ကိုယ့်မိသားစုတွေအကုန် ကံဆိုး‌နေတယ်ထင်ရင် ရှေ့၊ နောက် အိမ်တံခါး‌တွေဖွင့်ထားပြီး အိမ်ရှိလူကုန် အိမ်လယ်ကစ ရှေ့‌နောက်အ‌ပေါက်ဘက်ကို တံမြက်စည်း လှည်းခိုင်းပါ။ ၆။ အိမ်ဝင်တံခါးမှာ တံမြက်စည်း … Read more
လက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားရင် ချစ်သူနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ဒီလိုငွေစုကြည့်ပါ…
လက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားရင် ချစ်သူနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ငွေစုကြည့်ပါ ရည်းစားဖြစ်ပြီး ၂နှစ်လောက်မှာ နှစ်ယောက်သား ပိုက်ဆံစုရအောင်လို့ စပြီးတိုင်ပင်ဖြစ်ကြတယ်….အဲ့ဒါနဲ့စုမယ်ဆိုပြီး ငွေစစုဖြစ်သွားတာပေ့ါ …. တစ်လတစ်ခါ ဘဏ်ထဲငွေထည့်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ် လိုက်တယ် ….ကိုယ်ကတော့ လခစား ဝန်ထမ်းဆိုတော့ အများကြီးမစုနိုင်ဘူး (၃ပုံ ၁ပုံလောက်ပေ့ါ ) ….။ တစ်လ နှစ်ယောက်ပေါင်း ၁သိန်း စုကြမယ်ဆိုပြီး ဘဏ်စာအုပ်လေးလုပ်လိုက်ကြတယ် ….Bank account ကိုလဲ ၂ယောက်နာမည်နဲ့ ….။ KBZ_Call_Deposits_account လုပ်ထားလိုက်တယ် အဆင်ပြေတဲ့လူ သွားလို့ရအောင်ပေါ့ ….။ အဲ့လိုနဲ့ စု လာလိုက်တာ ဘဏ်စာအုပ်လေး ၂နှစ်နဲ့ ၄လ ပြည့် ( ရည်းစားသက်တမ်း ၄နှစ်နဲ့ ၄လ)မှာ သိန်း ၃၀ လောက် စုမိသွားတယ်။ ဘဏ်စာအုပ်လေးခနခနထုတ်ထုတ်ကြည့်ပြီး ပီတိတေဖြာတဲ့ အရသာကလေ … Read more